၀က်သားအချိုချက် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > .:::ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ:::. > စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း > ဟင်း > ၀က်သားအချိုချက်
View Full Version : ၀က်သားအချိုချက်
ပဲငံပြာရည်က အကြည့်နဲ့ အပျစ်နဲ့ဆတူရောရမှာလား :? ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာ pressure cooker မရှိဘူးဗျ။ ရိုးရိုး တည်နည်းနဲ့ ဆိုရင်ရော နူးအောင်ဒီတိုင်းပဲ ပြုတ်ရမှာပဲ ထင်တယ်။ တစ်ကယ် လုပ်စားမှာ ဒီတစ်ပါတ်ထဲကို ဟီးဟီး :4: